Donald Trump oo ka Hadlay Askari Soomaaliya lagu Dilay – Radio Daljir
Donald Trump oo ka Hadlay Askari Soomaaliya lagu Dilay
May 6, 2017 8:28 b 1
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay dil askari katirsan ciidankooda loogu geestay gudaha Soomaaliya ,kadib howlgal ciidanka Milatariga ka qeyb qaateen oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose.
Donald Trump ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid askariga katirsanaa ciidanka Mareykanka ee lagu dilay duleedka Degmada Afgooye, waxa uuna tilmaamay in askariga uu dhintay isaga oo waajibaadkiisa qaran gudanaya.
Waxa uu ku hanjabay Madaxweynaha dalla Mareykanka in ay sii xoojin doonaan howlgalada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya, waxa uuna xusay in howlgalo dhinaca cirka ah ay qaadi doonaan.
Howlgal ay ka qeyb qaateen ciidamo Mareykanka ah oo habeen hore ka dhacay deegaan katirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa lagu dilay askari katirsanaa cidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowlada Mareykanka.
Wasiir Cabbaas Hooyadi oo Farriin Dirtay iyo Dr Nuur Faarax oo ka Hadlay Qaabkii Dilku u Dhacay (Muuqaal)
ninka waalan ee trump haduu gaal xun oo bakhtiyey weliba xadaro ku sooduulay dal aanu lahayn yaa katacsiyeynaaya kumaankumka muslimiinta ah ee lagumaadayo